ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကမ္ဘာကတောင် လာပြီး မှတ်တမ်းတင်နေကြပြီ – Myanmar
ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကမ္ဘာကတောင် လာပြီး မှတ်တမ်းတင်နေကြပြီ
UNOPS, WHO နှင့် ICRC ၏ အကြံပေးကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း၏ ကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာသို့ လာရောက်လေ့လာ
UNOPS, WHO နှင့် ICRC ၏ အကြံပေးကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း၏ ကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာသို့ လာရောက်လေ့လာကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကပ်ရောဂါ တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်မှု လုပ်ငန်းစဉ် အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန (MOHS) ၏ ခွင့်ပြုမှုဖြင့် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းသည် နိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့ဖြင့် ရေရှည် လက်တွဲပူးပေါင်းမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကာ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် နည်းပညာပိုင်း၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအပိုင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမည်
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်၊ ရန်ကုန် – ကုလသမဂ္ဂစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာရုံး (UNOPS)၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC) အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ရန်ကုန်မြို့၊ သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်းတွင်တည်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစောဆုံးစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာသို့ အောက်တိုဘာလ (၆)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး အသစ်ဖွင့်လှစ်တော့မည့် ICU/HDU unit – ဧရာဝတီစင်တာ (C)အား ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနှင့် စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ထားရှိမှုတို့ကို လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။
လာရောက်လေ့လာကြသော ပညာရှင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများအား ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ခံ ဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်မှ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဧရာဝတီစင်တာ၏ လည်ပတ်နေပုံအဆင့်ဆင့်ကို အသေးစိတ်လိုက်လံရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဧရာဝတီစင်တာ၏ ရောဂါကုသရေး နှင့် COVID-19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးမှုအပိုင်းတို့အား အရှိန်အဟုတ်မြှင့်တင်ရန်နှင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါ၏ ဒုတိယလှိုင်းတွင် ရောဂါပျံ့ပွားမှုကို ပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်ရည်ရှည်လက်တွဲပူးပေါင်းမှုများလုပ်ဆောင်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဆွေးနွေးမှုတွင် ICU/HDU Critical Care unit ရှိ ဆေးဘက်ဆိုင်ဝန်ထမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအား အထောက်အပံ့ပေးရန် ပံ့ပိုးကူညီမည့် နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး UNOPS မှ တာဝန်ရှိသူများက ဧရာဝတီစင်တာမှ လိုအပ်သော သင်တန်းပို့ချမှုများနှင့် ကုသရေးအတွက် ပစ္စည်းများကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုတွေ့ဆုံမှု မတိုင်ခင် Max Myanmar Group ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးဇော်ဇော်သည် အောက်တိုဘာလ (၃) ရက်နေ့တွင် UNOPS နှင့် WHO မှ ပညာရှင်များနှင့် အွန်လိုင်းမှ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် ကုသရေးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည့် နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပါသည်။ WHO မှ ICU တွင် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်မည့် ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများနှင့် မေ့ဆေးပညာ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းပညာရပ်များအတွက် အွန်လိုင်းသင်တန်းများပို့ချမှုတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ UNOPS မှ procurement, logistics, infrastructure ပိုင်းများတွင် ပါဝင်အားဖြည့်ကူညီကာ နိုင်ငံတကာမှ အလှူရှင်များနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ICRC မှ ICU ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမည်ကြောင်း အသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြသည်။
ဧရာဝတီစင်တာကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန နှင့် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းတို့ ပူးပေါင်းကာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံနေရသည့် လူနာများကို ယာယီကုသမှုပေးနိုင်ရန် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ ကနဦးပိုင်းတွင် (၄၂၅) ခုတင်ဆန့်သော ကုသရေးစင်တာကို စက်တင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် (၅၇၅) ခုတင်အထိ တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့၍ အောက်တိုဘာလ (၃) ရက်နေ့တွင်တော့ (၈၇၅) ခုတင်ကုသရေးစင်တာအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မကြာမီအချိန်တွင်လည်း (၇၅) ခုတင်ဆန့် ICU/HDU Critical Care Unit ကိုလည်းထပ်မံဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းအနေနှင့် ဧရာဝတီစင်တာမှ တဆင့် နိုင်ငံတကာမှ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ လုပ်အားပေးများဖြင့် စုပေါင်းကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင် ၎င်းတို့၏ အသိပညာများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို အသုံးချနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ICU/HDU များအတွက် အထူးလေ့ကျင့်ထားသည့် အတွေ့အကြုံရင့် ဝန်ထမ်းများ ထားရှိတာဝန်ပေးရန် လုပ်ဆောင်နေပြီး ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနှင့် နေရာထိုင်ခင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် အကူအညီပေးလိုသော ပါတနာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားသော နိုင်ငံတကာမှ ကျွမ်းကျင်လုပ်အားပေးအဖွဲ့များကို ကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။
အရေးပေါ်လူနာတွေကို အနီးကပ်ကြပ်မတ် ကုသပေးဖို့ အဓိကလိုအပ်နေတဲ့ ICU/HDU ဧရာဝတီစင်တာ
ရန်ကုန်မြို့မှာ အရေးပေါ်လူနာတွေကို အနီးကပ်ကြပ်မတ် ကုသပေးဖို့ အဓိကလိုအပ်နေတဲ့ ICU/HDU ဧရာဝတီစင်တာကို ဆရာကြီးဇော်ဝေစိုးကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး အမြန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း အနေနဲ့ အလှူရှင်များ၊ ဆရာဝန်ဆရာမများနဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ UNOPS၊ WHO၊ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ဧရာဝတီစင်တာကို လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး အကြံဉာဏ်နဲ့ လိုအပ်တာတွေ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့အတူ လူသားအရင်းအမြစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်တန်းတွေပို့ချပေးဖို့နဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆရာဝန်တွေ ပူးပေါင်းကုသနိုင်ဖို့ကိုလည်း ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတို့ရဲ့ အနစ်နာခံကြိုးစားဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့် လူသားတွေရဲ့ အသက်ကို တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားကယ်တင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။Lead by Professor Dr. Zaw Wai Soe, Ayeyarwady Foundation is taking further steps to open the ICU/HDU Critical Care Section of the Ayeyarwady Center, to closely monitor emergency patients.Ayeyarwady Foundation is working in close collaboration with the Ministry of Health and Sports, along with the valued donors, health care workers, volunteers and with International and local organizations. Representatives from International Organizations such as UNOPs, WHO, ICRC paidavisit to observe the Ayeyarwady Center and gave words of advice on the ongoing process. Also discussed was the formation ofalong-term multilateral relationship to jointly support efforts to increase the treatment and testing capacity and Human Resource support of International and local doctors. We will support and save lives of our people with all our collective efforts and the unwavering sacrifices of our healthcare workers.
Posted by U Zaw Zaw on Wednesday, October 7, 2020
Spa သွားပြီး အနှိပ်ခံရာကနေ အသက်ပါပေးလိုက်ရတဲ့ အမျိုးသား
စုံတွဲများ လက်ထပ်ပြီးစမှာ ၃ လခံထိုးဆေး သုံးသင့် မသုံးသင့်